Spessart lodge - eyilelwe (hayi kuphela) iimvumi - I-Airbnb
Spessart lodge - eyilelwe (hayi kuphela) iimvumi
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarkus
I "Beat and Breakfast" (Beat & Breakfast) - Indlu yombono eyilwe yimvumi yeemvumi.
Indawo yokulala ibekwe kufutshane ne-Aschaffenburg am Main (15Min) / Frankfurt am Main (45Min) kwipaki yendalo "Spessart". Ungaqala uhambo oluhle ukusuka apha okanye ukonwabele nje indawo ejikeleze idyllic.
Umxube onempilo wendlu yeendwendwe / i-cottage / indlu yokuziphekela kunye nestudiyo sokurekhoda / indawo yokuziqhelanisa / isiteji se-cabaret.
Ukubhalwa kweengoma , ukurekhoda...
Ukubhalwa kweengoma , ukurekhoda, okanye uqheliselo olunzulu phambi kokhenketho oluzayo - iB & B ixhotyiselwe ngokugqibeleleyo.
Izixhobo zomculo, inkqubo yesandi kunye nezixhobo zokurekhoda ziyafumaneka kwaye zilungele ukusetyenziswa.
Indawo (igumbi lokurekhoda / indawo yokuziqhelanisa yenziwe ngokuvakalayo) - iplagi & dlala!
Ugxininiso olupheleleyo kwiprojekthi ngaphandle kokuphazamiseka.
Nokuba iklasikhi, i-rock, i-pop okanye i-jazz - i-ambience kwi-B & B iyakhuthaza kwaye inika umoya omnandi wokusebenza.
Indawo yokuhlala yebhendi / ensembles ziyafumaneka endlwini .
I-B & B imi kumbindi weJamani- ilungele kakuhle iholide yebhendi emfutshane.
Kungekude kakhulu ziidolophu ezifana neAschaffenburg, iFrankfurt am Main kunye neWürzburg.
I-Wiesbaden kunye ne-Mainz zibekwe malunga nemizuzu engama-55 ukusuka apho.
I-Aschaffenburg ingasebenza njengomthombo wenkuthazo kwi-Colos Saal - iklabhu yomculo omangalisayo enexabiso elinqabileyo.
Sifumanisa ukuba indawo yethu ifanelekile ngokukodwa:
kwaye okokugqibela kodwa okungancinci: ikhefu elifutshane kwi-naturepark Spessart
Malunga neBeat & Breakfast
Iprojekthi yethu yaqala ngombono wokudala indawo enye kwindalo, apho iindwendwe zinokwenza umculo ungaphazamiseki kwindawo epholileyo. Iprojekthi iphuhliswe ngokukhawuleza ukuba ibandakanye injongo enkulu ngakumbi: indlu enefenitshala epheleleyo, ekhululekile kwaye enencasa, apho iindwendwe zinokuhlaziya amandla azo kwaye ziphile ngokuthanda kwazo umculo.
Indlu ibandakanya amagumbi amabini okurekhoda kunye negumbi elikhulu lokulawula, amagumbi amabini okulala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, i-WC, kunye ne-patios ezimbini ezinemibono yentlambo ehambelana nomoya okhululekileyo.
IBeat & Breakfast yethu, ekwindawo ezolileyo kumda weSpessart Nature Preserve, ibonelela ngamathuba okuncipha kubomi bemihla ngemihla, kwaye idala indawo yokuthanda umculo, ukuphumla kunye neholide. Idolophu encinci yaseDornau kufutshane neSulzbach am Main yonwabela umoya onelanga ngenxa yokuphakama kwayo, kwaye ijikelezwe ngamadlelo namahlathi. Indawo ibonelela ngeemeko ezifanelekileyo zokurhoxa okumangalisayo kwindawo yabucala.
Izixeko zaseFrankfurt am Main (imizuzu eyi-45) neAschaffenburg (imizuzu eyi-15) zifikeleleka lula. Unokufumana kwakhona uluhlu olutyebileyo lwemisebenzi yolonwabo kunye neminikelo phantsi kwesihloko esithi "Lodge".
Kunye nezifundo ezimbini zokurekhoda (25m2 & 5 m2), igumbi lokulawula elikhulu (16 m2) kunye nelounge (34 m2), sinamagumbi amabini okulala (12 m2 & 14 m2), ikhitshi (10 m2), igumbi lokuhlambela ( 6m2), WC, kunye neepatio ezimbini (6 m2 & 20 m2) ezinembono phezu kwentlambo.
Kunye nethuba lokwenza umculo, uluhlu olubanzi lwezixhobo ezikhoyo zenza ukuba iBeat & Breakfast yethu ibe yodwa. Iindwendwe zidinga ukuzisa okuncinci kakhulu, kuba amaziko ethu axhotyiswe kakuhle kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko ukuzalisekisa iimfuno ezisisiseko zobugcisa beemvumi. Unokufumana ulwazi oluthe kratya malunga nokukhethwa kwethu kwezixhobo phantsi kweendidi "I-Lodge" kunye ne "Isitudiyo sokurekhoda".
I-B&B yenzelwe ukukunceda uzive ukhululekile apha. Injongo yethu kukuba sikubonise kuphela ngamagumbi akhethekileyo kunye nethuba lophuhliso lobugcisa, kodwa kunye nezixhobo eziyimfuneko zokubonelela "iphakheji engenakukhathazeka" kwiindwendwe zethu.
Unethuba lokurenta yonke indlu yeBeat & Breakfast iyonke, okanye imigangatho ezimeleyo inokuqashwa ngokwahlukeneyo. Sifumana izixhobo zethu zifaneleke ngakumbi:
- Ukulungiselela okunzulu kuthotho lwekonsathi
- iholide yebhendi okanye impelaveki
- iimpelaveki zokuziqhelanisa
- ikhefu elifutshane kwingingqi ye Spessart
- Iinkqubo zokuyila
- Ukurekhoda kwesandi kunye neeseshoni zokurekhoda
- iindibano zocweyo
- iikonsathi mini
I-B&B yethu ingathanda ukukunceda unciphise ubomi bakho bemihla ngemihla. Ngesi sizathu sikwafumana ingqikelelo yozinzo ibalulekile. Sizama ngokukodwa ukuphila ngokuvisisaniyo nendawo esihlala kuyo kunye nokuzalisekisa uxanduva lwethu lwendalo, kwiindwendwe zethu nakwindalo.
Ngesi sizathu siye sakhetha ukwakha indlu yethu ngokuyintloko ngezinto zendalo kunye nokuzalisekisa imigangatho yokwakha "indlu ye-passive". Imigangatho yokhuni, udaka lodongwe kunye nokujikeleza komoya olawulwayo emagumbini kunika imozulu yangaphakathi ekhululekile kunye ne-allergen. Ukusetyenziswa kwamanzi emvula ukugungxula izindlu zangasese kunye nabaqokeleli belanga kuninzi lobonelelo lwethu lombane luqhubeleka nombono ozinzileyo. Amagumbi afudunyezwa ngesitovu seenkuni.
Amabali amathathu anika indawo yophuhliso kunye nokuphumla. kunye ca. I-100 m2, sinikezela ngeendwendwe ezininzi indawo kunye nenkululeko yomsebenzi wabo wobugcisa kunye nokudala.
Umgangatho ophezulu unamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela.
Umgangatho ophantsi ovulekileyo unendawo yokuphumla eyaneleyo kunye negumbi lokulawula - lilungele ngokufanelekileyo ukuziqhelanisa ne-acoustic, iintlanganiso zesiqhelo kunye neendibano zocweyo.
Izitudiyo zokurekhoda kunye nekhitshi zifumaneka kumgangatho ongaphantsi.
4.88 · Izimvo eziyi-27